Ny Marketing Podcast dia misy amin'ny Stitcher! | Martech Zone
Ny Marketing Podcast dia misy amin'ny Stitcher!
Alahady, Jolay 3, 2011 Alatsinainy, Aogositra 4, 2014 Douglas Karr
Marty Thompson nampahafantatra ahy ny Stitcher, fampiharana mahafinaritra mampiangona podcast ary mahatonga azy ireo ho mora hita amin'ny findainao. Na eo amin'ny an iPhone, Android, Blackberry, na Palm - azonao atao ny misintona an'i Stitcher ary mihaino anay izao Podcast Marketing amin'ny Edge an'ny Radio Web.
Ny mpijery ny fampisehoana dia nitombo tsy nitsaha-nitombo ary mankafy ireo vahiny lehibe izahay - ao anatin'izany Lisa Sabin-Wilson, Eric Tobias, Chris Brogan, Debbie Weil, Jason Falls, Scott Stratten, Nicholas Carr… Ary maro hafa. Ny fampisehoana dia alaina maherin'ny 5,000 ary azo alaina ihany koa amin'ny iTunes. Isan-kerinandro dia azonao atao ny miditra amin'ny efitrano fifampiresahana an-tserasera izay ananan'ny mpihaino miresaka, manampy lanja ny fandaharana ary mametraka fanontaniana.
Raha manaraka ny Bilaogy Marketing Tech ao amin'ny Facebook, hahazo fampandrenesana ianao rehefa hanomboka ny fampisehoana. Manantena aho fa afaka hiaraka aminay isan-kerinandro ianao, fotoana lehibe nanararaotana nianarana avy amin'ny mpitarika amin'ny Marketing sy Teknolojia izany. Raha liana amin'ny fampisehoana ianao dia namandrika volana roa izahay fa ampahafantaro anay amin'ilay tranokala. Raha any Indianapolis ianao dia afaka midina mihitsy ary ho tonga amin'ny fampisehoana any amin'ny biraonay.
Misaotra tamin'ny fanohananana - ary mamorona kaonty maimaimpoana ao amin'ny Stitcher mihaino ny seho farany nataonay! Manana fifaninanana izy ireo izao izay ahazoanao mandresy a Sonos S5 + ZoneBridge (sanda 500 $).
Tags: Podcast Marketingstitcherradio stitcher
Zava-dehibe ve ny benchmark Google?
WordPress Mobile miaraka amin'i WPtouch Pro
12 Nov 2011 tamin'ny 4:28 PM
Nanavao ity lahatsoratra ity tamin'ny resadresaka nifanaovana tamina horonantsary mahafinaritra niaraka tamin'i Jeff avy any @geekazine tao #bwela. Aza hadino ny mihaino ny fandaharana amin'ny onjam-peo - resaka mifono hevitra matetika miaraka amin'ireo vahiny tsy mampino izany.